Chii chinonzi Sanno Sodo Memorial Hall? | Sanno Sodo Memorial Hall
Tokutomi Soho ndiye munhu akaburitsa yekutanga Japan yakazara magazini "Rudzi Rwamwari" uyezve iyo "Kokumin Shinbun".Chinyorwa chaShoho, "Nhoroondo Yevanhu vechiJapan muNguva Yemazuva Ano," chakatangwa muna1918 (Taisho 7) pazera remakore makumi mashanu nematanhatu uye chakapedzwa muna 56 (Showa 1952) aine makore makumi mapfumbamwe.Inopfuura hafu yemavhoriyamu zana akanyorwa panguva yaOmori Sanno.Soho akatamira kunharaunda iyi muna 27 (Taisho 90) ndokugara pasi pezita raSanno Sosudo kudzamara aenda kuAtami Izusan muna 100 (Showa 1924).Mukati meimba yekugara, maive naSeikido Bunko, ane mabhuku zviuru zana zveJapan nemaChinese akaunganidzwa naSoho.
Iyo Sanno Sosudo Memorial Hall yakavhurwa muna Kubvumbi 1986 (Showa 61) mushure mekunge Ota Ward atora nzvimbo yaimbogara Suho kubva kuShizuoka Shimbun muna 1988 (Showa 63).
Tokutomi Soho naCatalpa
Zita reJapan remuti weCatalpa mupaki ndiAmerican Catalpa ovata.Ndiwo muti une hukama naJoseph Hardy Neesima, mudzidzisi weupenyu hwese weSoho uye muvambi weDoshisha University.Ichiri kunyatso chengetwa semuti unokudzwa uyo unomiririra rudo rwevatenzi vaviri nevadzidzi, uye wega wega muna Chivabvu naJune, unotakura maruva machena akaita sebhero.
Akazvarwa muna Ndira 1 (Kurume 25 wegumi khalendari) muSugido Village, Kamimashiki Dunhu, Kumamoto Prefecture, mumusha weMother Hisako.
Yakaendeswa kuTokyo nechinangwa chekuve mutori wenhau.Akapinda Tokyo Chirungu Chikoro (yaimbove yekutanga chikoro chepamusoro) uye akazotamira kuDoshisha Chirungu Chikoro.
Kurume 3 Oe Gijuku anovhura.
Kugamuchira Mai Shizuko.
Yakabudiswa "Ramangwana Japan".Oe Gijuku akavhara uye mhuri yese yakatamira kuTokyo.
Yakagadzwa Minyusha uye yakaburitsa "Shamwari Dzenyika".Inonzi Soho.
Kutanga kuburitswa kwa "Kokumin Shinbun", mutungamiri uye mukuru mupepeti.
Akashanyira Tolstoy, achifamba-famba kuEurope naEigo Fukai.
Akasarudzwa senhengo yeImba yaIshe.
Yakapihwa vhoriyamu yekutanga yenhoroondo yenyika yeJapan munguva yekutanga kwazvino.
Sanno Kusado yakapedzwa.Mhuri inotamira pano.
Nhengo yeImperial Academy.
Siya iyo Kokumin Shinbun kambani.Akava muenzi wekukudzwa kwaDaigo Tohnichi (Mainichi Shimbun).
Akava nhengo yeImperial Academy yeArt.
Akagamuchira Order yeTsika uye akatamira kuAtami Izusan Yoseidou.
Pakupera kwehondo, akaramba hofisi yeruzhinji nekukudzwa.
Yakapedzisa kunyorwa kwe100th vhoriyamu yeNational Nhoroondo.
Akava mugari anokudzwa weMinamata Guta uye anokudzwa mugari weKumamoto Guta.
Akafa munaNovember 11 kuAtami Izusan Yoseidou.